I-Crystal Shutter Ebonakalayo Ebonakalayo Yezokuhweba China Manufacturer
Incazelo:I-Shopfront ebonakalayo ehamba nge-Rolling Shop Gate,I-Crystal Shutter Door ehlukile,I-Shopfront Crystal Roller Shutter Door
Home > Imikhiqizo > I-Crystal Roller Shutter Door > I-Crystal Shutter Ebonakalayo Ebonakalayo Yezokuhweba
I-Crystal Shutter Ebonakalayo Ebonakalayo Yezokuhweba
I-Model No.: HF-J501
Umnyango we-crystal shutter umnyango wenziwe ngamakhulu ezindiza ze-pvc ezingena emgodini wensimbi. Inezinzuzo zokubonakala obala, ukulwa nobugebengu, ukulwa nemvula, uthuli nokungafaki. Iminyango ye-Crystal shutter isetshenziselwa kakhulu ezitolo ezinkulu. Ziyakwazi futhi ukuvula iminyango yangaphakathi efuna ukubonakala okuphezulu. Uma umnyango uvaliwe, umsindo ungancishiswa kakhulu, unikeze indawo yokusebenza ethule. Ukubonakala komnyango we-crystal shutter kunikeza ukubonakala okuhle kakhulu.
Umnyango we-crystal shutter usukhuphukele phezulu kwendlela, futhi okubonakalayo okubonakalayo kwe-acrylic sheet kwenza kube kuhle futhi kuphezulu. Futhi isetshenziswe kakhulu ezincwadini ezinezidingo zomqondo, njengezitolo zezindawo zokuthenga, iziqhafaza njalonjalo. Indawo yokusebenza iphephile futhi inokwethenjelwa. Iminyango ye-Crystal shutter inhle kakhulu ezindaweni eziphephile, ezinhle nezitayela ezinjengamabhange, ezokuxhumana, eziteshini zomshuwalense, ezitolo zezemidlalo nama-balconies e-villa.
Iyini imininingwane yesikrini sethu se-crystal shutter?
- I-Almost transparent - display ingabonakala uma isitolo ivaliwe
- Amandla ensimbi eseduze nokuphepha
- Okungenakulinganiswa - Okufakwe ku-aluminium e-extruded, isimo sezulu esinamandla nesibonakaliso sokugqwala nge-polycarbonate glazing eyenza i-shutter ingabi nakancane.
--Linga izitolo zokuthenga nezitolo eziphezulu
- Ukujwayela okufakiwe - ukuvumelanisa zonke ukuvula ngokugcwele
- Kusetshenziselwa ngokweqile ukuqhutshwa okusheshayo okusheshayo nokusebenza phansi.
Izinto ezibonakalayo ezingenalutho: i- polycarbonate (i-PC ye-bulletproof glue)
Ukucaciswa: 100 mm × 330 mm
Iphrofayela ye-al-aluminium i-alloyum yenziwe kabili yenzelwe ukufakwa emnyango.
Ukulula nokucindezela okuqinile ukucindezela
Yenziwe nge-aluminium alloy, ukuklanywa okukhethekile, ukumelana nokubola, ukubukeka okuhle
I-aluminium alloy, i-design groove double, impahla engamungulu ingafakwa emgodleni ukuze ifinyelele umphumela wokuyisimungulu
Ngemoto engu-24 V DC, ithule, iphephile, inokwethenjelwa futhi ihlala njalo.
Kungatholakala: umzimba womnyango uqala / uvale ngokuzenzekelayo ukuyeka / ukuguqula uma izithiyo zenzeka; Umzimba womnyango uvula futhi uvale, ukukhanya ngokuzenzakalelayo nokulibaziseka imizuzu emithathu; ukuhluleka kwamandla kungashintshwa ekuvulekeni kombhalo.
Ukuzikhethela okukhethwa kukho: ukunikezwa kwamandla okungenakunyakaziswa.
Ukugqama kwethu komkhiqizo :
-1 Ukubuka okuphelele, ukufeza umphumela wokukhangisa kwewindi lewindi, ukukhetha okhethwayo yedolobha elihamba phambili
-2 Ukusebenzisa i-polycarbonate, ukulwa okuhle nokulwa
-3 Umphumela oyisimungulu osindile, ukuvimbela umoya nemvula
-4 Ukwakhiwa kwamandla amakhulu, iphrofayili e-aluminium egxilile emnyango wePC, amandla aqinile okwakhiwa, okufanelekile ukusetshenziselwa ubuciko obukhulu 5, ukuklama okulula nokuphanayo, ukubukeka okuhle
-6 Ungafakwa phezulu nangaphansi / kwesokunxele nangakwesokudla, efanelekayo ezindaweni ezikhethekile zokufaka imodeli ukufaka iminyango ye-crystal shutter
Uma unenkinga, sicela uxhumane ngomusa kimi.
Izigaba zomkhiqizo : I-Crystal Roller Shutter Door
I-Roll ye-Commercial Roll evulekile eDini lokuthenga Xhumana Nanje
Gcina i-Crystal Roller Shutter Door ehlukile Xhumana Nanje
i-polycarbonate ebonakalayo ebizwa nge-Crystal Roller Shutter Door Xhumana Nanje
I-Commerce Store Ebonakalayo I-Crystal Rolling Shutter Door Xhumana Nanje
I-Door Transfer Crystal Roller Shutter Door Xhumana Nanje
Thenga isitolo sokungena esitolo sokungena esitolo sangaphandle Xhumana Nanje
I-PC engahambisani ne-Crystal Rolling Shutter Door Xhumana Nanje
Commercial Transparent Crystal Rolling Shutter Door Xhumana Nanje
I-Shopfront ebonakalayo ehamba nge-Rolling Shop Gate I-Crystal Shutter Door ehlukile I-Shopfront Crystal Roller Shutter Door I-PC Ebonakalayo I-Crystal Rolling Up Door I-Shopfront Crystal Pc I-Roller Shutter Door Ukufakwa kwamasango okusheshayo okuhamba nge-Rolling Shutter I-Shopfront Crystal PVC Roller Shutter Door I-Polycarbonate Ebonakalayo I-Crystal Shtter Door